एम्बुलेन्स – Himalaya Television
७ असार २०७८ सर्लाही । जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा रहेका एम्बुलेन्स र शवबाहन प्रयोगबिहीन हुँदा बिरामीलाई मर्का परेको छ । सरकारी बजेटबाट खरिद गरिएका एम्बुलेन्स र शवबाहन तीन महिनादेखि अस्पताल परिसरमै थन्क्याइएको छ तर विरामी भने निजीमा धेरै रकम तिरेर...
१ असार २०७८ पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रममा कृषिको...
१६ जेठ २०७८ पाँचथर । पाँचथरमा गए राति एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । झापाको बिर्तामोडबाट ताप्लेजुङ जाँदै गरेको प्रदेश नं १–०१–००१ च ७७०६ नम्बरको एम्बुलेन्स गए राति २ः४० बजे...
एम्बुलेन्समा गाँजा भेटियो !
११ जेठ २०७८ धरान । एम्बुलेन्सको काम बिरामीलाई ओसारपसारमा सहयोग गर्नु हो । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, मानवीय सेवामा उपयोग हुने एम्बुलेन्सले नै अबैध लागू पदार्थ गाँजा बोक्यो भन्दा ! इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले गएराति एम्बुलेन्समा १०० किलो गाँजा...
‘भ्युटावर र उद्यान बनाउने पैसाले एम्बुलेन्स खरीद गरिएका भए.’
२८ वैशाख २०७८ ओखलढुङ्गा । कारोना सङ्क्रमितलाई अस्पताल लैजान जिल्लामा एम्बुलेन्सको समस्या भएको छ । जिल्लामा पर्याप्त एम्बुलेन्स नहुँदा र भएकाले पनि सङ्क्रमितलाई बोक्न नमान्दा नागरिकले आपत्कालीन अवस्थामा सेवा उपयोग गर्न नपाएका हुन् । एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीलाई अस्पताल लैजान...
२७ वैशाख २०७८ काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख महेश खरेलको नीजिसहित यहाँका दुई स्थानीय तहका जनप्रतिधि र कर्मचारीको सवारी सधानलाई कोरोनाका बिरामी बोक्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्सका रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका र भुम्लु गाउँपालिकाको प्रमुख र...
काठमाडौंमा एम्बुलेन्स चाहियो ? १०२ नम्बरमा फोन गर्नुस्
२१ वैशाख २०७८ काठमाडौं । नेपाल सरकारको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले महामारीका समयमा अत्यावश्यक सेवा लिन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र टोल फ्री नम्बरहरुको प्रबन्ध गरेको छ । केन्द्रको टोल फ्री नं ११४० रहेको छ भने एम्बुलेन्सका लागि १०२, शव...
पाँच स्थानबाट निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, यो नम्बरमा चालकसँग सिधै सम्पर्क गर्नुस्
१७ वैशाख २०७८ काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष अवस्थामा नागरिकको सुविधाका लागि पाँच स्थानबाट निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिएको छ । महामारीको समयमा अन्य रोगका कारण अस्पतालमा समयमा नै बिरामीलाई पु¥याउन नसक्दा अकालमा ज्यान जाने सक्ने भन्दै नागरिकले समान पहुँच...
१५ वैशाख २०७८ काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएका र अन्य बिरामीलाई अस्पतालसम्म लान ल्याउनका लागि छुट्टाछुट्टै निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय काररोना भाइरसका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रणका...
१० वैशाख २०७८ कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का जटिल बिरामीको सेवाका लागि सुगममा एम्बुलेन्स र दुर्गम जिल्लामा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)का संयोजक तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार...